“ UK Porn သည်သင်မနှစ်သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲတော့မည်” (VICE) - Brain On Your Brain
“ UK Porn သည်သင်မနှစ်သက်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲတော့မည်” (VICE)
အစိုးရကလုံးဝကျော်မယူအခမဲ့ porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များလှည်း blanche အများစုထိန်းချုပ်ထားသောရိပ်ရတဲ့ကုမ္ပဏီအားပေးတော်မူပြီဘယ်လို
15 at: မတ်လများ၏ 03st အပေါ် 1, 2017, MindGeek ထံမှအကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ် - သမိုင်းထဲမှာသြဇာအရှိဆုံး porn အင်ပါယာ - ဗြိတိသျှအစိုးရအနေနဲ့အီးမေးလ်ကစေလွှတ်ခဲ့သည်။
“ Matt Hancock [ဒီဂျစ်တယ်ပေါ်လစီ ၀ န်ကြီးဌာန] သည်ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံရိုက်သူများအား chat ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မပါ ၀ င်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ကို (ဘယ်သူ့ကိုမှခြေချစရာမလိုဘဲ) သူနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောဖို့တကယ်အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်ငါဟာသူနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးခြင်းထက်ပိုမိုပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ထိရောက်သောဥပဒေကြမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုကိုလည်းပြသပါ။ [အပြုံးမျက်နှာ]။"
ပြန်ကြားရေးတောင်းဆိုချက်အရတစ်လွတ်လပ်ခွင့်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသ - - ဒါဟာအီးမေးလ်များကိုတစ်ဦး string ကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆောင်းရာသီကတဆင့် MindGeek နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ဦးစီးဌာန, မီဒီယာနှင့်အားကစားအကြားစေလွှတ်သဖြင့်, ဗြိတိန်နိုင်ငံကအစဉ်အမြဲ porn ကိုချောင်းမြောင်းလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်းကိုရဲ့ဖြစ်ရပ်များတစ်ကွင်းဆက်အတွက်တဦးတည်း link ကို။
သို့သော်ဤသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအာဏာအကြောင်းပါ။ ဒါဟာပြည်နယ်နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းအကျိုးစီးပွားအတူတူအိပ်ရာသို့တက်နိုင်ပုံကိုလျင်မြန်စွာအကြောင်းပါ။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားသူများကအစိုးရသည်ကလေးသူငယ်များအားအမာခံအကြောင်းအရာများမှအကာအကွယ်ပေးရန်မဲဆန္ဒပေးသောကြိုးပမ်းမှုအရကမ္ဘာပေါ်တွင်အာဏာအရှိဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပညာရှင်ကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်းကိုအမှန်တကယ်လက်လွှဲပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ ဦး ရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ရဲ့ဘဝတွေကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြtheyနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။
၎င်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူ၏ရွေးကောက်ပွဲဆန္ဒပြပွဲ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုမြေပုံရေးဆွဲရာတွင်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်မိမိလက်များကိုဖွင့်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ သူက“ ကလေးဘဝကိုပျက်စီးစေပြီးမျိုးဆက်တစ်ခု၏စိတ်ကိုအဆိပ်ဖြစ်စေသည်” ဟုသူကပြောသည်။
သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေမွေးဖွားခဲ့သည်။ ယင်းလုပ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, 2018 ၏ဧပြီလကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်မှာ (AV စနစ်) သူတို့၏သုံးစွဲသူများကအတည်ပြုရန်အသက်အရွယ်မှ UK ရှိ operating အားလုံး porn sites များအတင်းလိမ့်မယ်။ သူတို့ငြင်းဆန်သို့မဟုတ်လိုက်နာရန်မတတ်နိုင်လျှင်, သူတို့သည်ပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ နှစ်လယ်ပိုင်းစျေးကွက်သတင်းစာဆောင်းပါးတွေရေးကြဘို့, Tory နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အများအပြားဗြိတိန်မိဘများကပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်သလိုပဲ။ သို့သျောလညျး, 2010 ပြီးသားက၎င်း၏ဒူးကအတင်းအကျပ်ခဲ့ကတည်းကညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းမှလူများအဘို့, ကပြွန်အင်တာနက်ဆိုက်များတွင်ပြန့်ပွားလျှင်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရနှင့်ယခုအစိုးရသည်၎င်း၏ဦးခေါင်းမှသေနတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။ အများဆုံးအခနျးထဲမှာကျည်ဆံကိုမြင်လျှင်ဘယ်မှာဒါပေမယ့် MindGeek အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်ကျည်ဆံဖြစ်သည်မဟုတ်လော ဒါကြောင့်လိုအပ်အားလုံးသည်အစိုးရက load ရခဲ့သည်။
သင်ယခုအပတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့လျှင် MindGeek ၌လည်းထိုအရာပါဝင်သည်။ MindGeek သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအစွမ်းထက်ဆုံးသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြသည့် Wizard of Oz of smut မျိုး။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဦး ဆောင်ညစ်ညမ်းသောရှေ့နေ Myles Jackman က MindGeek သည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိပြွန်ဆိုဒ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းမှာလူကြိုက်များခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆုံးသတ်ကိုသတ်ဖြတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လူကြိုက်များမှုကအခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခမဲ့ပေးရတာပါ။
MindGeek ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမတွေ့ရပါ။ အဲဒီအစားသင်ဟာရွှေရောင်နဲ့အနက်ရောင်တွေနဲ့စတိုင်ကျစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ကော်ပိုရိတ် waffle နှင့်တောက်ပနေသောအလုပ်သမားသက်သေခံချက်များကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မယ်။ အလွန်မြင့်မားသောလူကုန်ကူးခံရသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ SEO နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင်ခေါင်းဆောင်များပါ ၀ င်သည်။ ဒါကနောက်ဆုံးနည်းနည်း porn ဆိုလိုသည်။ MindGeek သည်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုနေ့စဉ် ၁၁၅ မီလီယံကျော်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Twitter, Amazon နှင့် Facebook ထက် bandwidth ပိုများသည်။
MindGeek (ထိုအချိန်က Manwin) ဟုအမည်ရသည့်ဂျာမနီမှ ၃၁ နှစ်အရွယ်ဂျာမနီမှ Fabian Thylmann က ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလှပစွာကျယ်ပြန့်သော“ ပြွန်” site ဈေးကွက်တွင်ပထမဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ အခမဲ့ - မကြာခဏခိုးကူးခံရသော - porn ပမာဏအမြောက်အမြားကမ်းလှမ်းခံရခြင်းကြောင့်စားသုံးသူများသည်အခြားနေရာများတွင်ဘာမျှမတတ်နိုင်သောအရာကိုပေးဆပ်ရန်မလိုပါ။ MindGeek သည်ရောင်းချမည့်မည်သည့်ပြွန်ဆိုဒ်ကိုမဆိုလိမ္မာပါးနပ်စွာခိုးယူခဲ့သည်။
ခြောက်နှစ်အတွင်းကကုမ္ပဏီ Pornhub, Redtube, Youporn, Twistys, Gaytube နှင့် Tube8 အပါအဝင်အင်တာနက်အပေါ်ထိပ်တဆယ်အများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ၏ခန့်မှန်းခြေရှစ်ပိုင်ဆိုင်သတင်းပို့ခဲ့သည်။ စျေးကွက်အပေါ်ယုံကြည်မှုကဒီ newfangled ယှဉ်ပြိုင်မှု၏မျက်နှာကိုအတွက်သိသိသာသာကျသွားနှင့်အတူ, MindGeek ရဲ့ tentacles ဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားကွင်း, Reality ဓမ္မရာဇဝင်နှင့် Brazzers အဖြစ်က၎င်း၏ကြီးထွားလာကွန်ယက်ကိုထိုကဲ့သို့သော paid-များအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများသို့ subsuming လွန်းအဆိုပါစတူဒီယိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ unfurl နိုင်ဘူး။ အမေရိကန် porn ကြယ်ပွင့် Siri ကိုအမျှ 2014 ရေးသားခဲ့သည်- Wal-Mart ကမြို့ငယ်လေးတွေမှာ Wal-Mart ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘယ်လိုတည်ဆောက်သလဲ၊ စျေးနှုန်းတွေကိုဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် mom-and-pop ဆိုင်တွေကိုပိတ်ပြီးမြို့ကနေထွက်ခွာခဲ့တယ်။ Wal-Mart တွင်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ရမည်နည်း။ Wal-Mart ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုထိပ်ဆုံးကနေအမေ -Pop ဆိုင်တွေမှာသွားပြီးသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အားလုံးကို Wal-Mart မှာပြန်ရောင်းဖို့အတွက်ခိုးယူခဲ့တယ်။ ”
ဂျက်ကီမန်က“ လူတွေကသူတို့ ၀ ယ်တာကိုသိဖို့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူး။ “ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းမှာသူတို့ဟာပစ္စည်းအချို့ပိုင်ဆိုင်တယ်၊ သူတို့ကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံရတယ်၊ မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှက်ကြောက်သလော။
MindGeek သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်အချိန်မှမည်မျှရရှိသည်ကိုသင်မသိစေချင်ပါ။ သို့သော်တစ်ချက်ကြည့်ရသော် MG Billing အိုင်ယာလန်လီမိတက်သည် ၂၀၁၄ မှ ၂၀၁၅ အတွင်းဒေါ်လာ ၄၂၇.၁၇ သန်း (ပေါင် ၃၂၁.၁ သန်း) သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၅၈၅,၀၀၀ (ပေါင် ၄၃၉,၇၅၀) ဝင်ငွေရှိခဲ့သည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ဒါက porn အတွက်ပေးဆပ်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည့် onanists များမှဖြစ်သည်။ MindGeek ၏ရှုပ်ထွေးသောအွန်လိုင်းကြော်ငြာကွန်ရက်ဖြစ်သော TrafficJunky သည်သုံးစွဲသူများ၏ကြည့်ရှုခြင်းအလေ့အထများ၊ la Facebook, Google, Amazon နှင့်အခြားဒေတာများကိုစုပ်ယူသည့်စောင့်ကြည့်အရင်းရှင်စနစ်အပေါ် အခြေခံ၍ မြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားသည့်ကြော်ငြာများကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းများစွာပိုများသည်။ ။
MindGeek ရဲ့အစည်းအဝေးကို Matt Hancock ကလက်ခံခဲ့ဖူးလားဆိုတာတော့မသေချာပါဘူး။ သူသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးစီးပွားရေးအက်ဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် (ရုပ်မြင်သံကြား X ပိုင်ရှင် Portland TV ကဲ့သို့သောအခြားသူများကိုလည်းတိုင်ပင်ခဲ့သည်) လွတ်လပ်စွာသတင်းအချက်အလက်တောင်းခံမှုတစ်ခုအရ MindGeek သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းအစိုးရနှင့်ငါးကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်အကြီးအသေးသို့မဟုတ်အငယ်စားအပြာကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုတက်ကြွစွာခြိမ်းခြောက်သောဥပဒေကိုအဘယ်ကြောင့်ထောက်ခံလိုသနည်း။
အဖြေကတော့ Jackman ရဲ့အဆိုအရ၊ “ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အစိုးရသည်တတိယပါတီကော်ပိုရေးရှင်းအကျိုးစီးပွားများကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်တာ ၀ န်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ “ ရလဒ်ကတော့ MindGeek ဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုအတည်ပြုစစ်ဆေးရေးထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာ ၀ ယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကအခြေခံအားဖြင့်ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့လိုင်စင်ပဲ။ ”
ပြဿနာကိုနားလည်ရန်, သင်အဆိုပြုထားသည့်စနစ်နားလည်ရပေမည်။ ဦးစီးဌာနယဉ်ကျေးမှုအဘို့, မီဒီယာနှင့်အားကစား VET porn အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦး foolproof အစီအစဉ်ကိုအတူတက်လာနိုငျအကြင်သူ၏ဖို့ AV စနစ်ဖြေရှင်းချက်တင်ဒါသိရသည်။ ရုပ်ရှင်ခွဲခြား၏ဖြစ်ကောင်းဗြိတိသျှဘုတ်အဖွဲ့ - - သူတွေကိုအစီအစဉ်များကိုအစိုးရကခန့်အပ်ထိန်းညှိခြင်းဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်တစ်ချိန်ကထို့နောက် porn sites များဝယ်ယူရန်အရာတစျခုကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်အရွယ်-စိစစ်အတည်ပြုကုမ္ပဏီတွေရဲ့တစ်ဦးကအိမ်ရှင်ဖြေရှင်းချက်တင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ တင်ဒါများပါဝင်သည်:
• (အမျိုးမျိုးသောဖြင့်ဖြစ်စေ) ခရက်ဒစ်ကဒ်: သတိပေးခံရအခါအသက်အရွယ်အတည်ပြုပေးရန်သင့်ကဒ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးပို့; သူတို့သည်သင့် 18 ကျော်ရှိပါတယ်အတည်ပြုပေးရန်သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီမေးကြည့်ပါ။
•လူမှုမီဒီယာ (Veridu): သင့်ရဲ့အချိန်ဇယားနောက်ဆုံးသတင်းများ, သင်၏ဓါတ်ပုံများ, မိတျဆှေစာရင်းများ, ပညာရေးသမိုင်း, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး metadata ကိုနှင့်အသုံးပြုမှုစက်အပေါငျးတို့သငျသညျ 18 ကျော်နေလျှင်ထွက်အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့သင်ယူမှတဆင့် rummage မှအသက်အတည်ပြုခွင့်ပြုရန်။
• SMS ကို (Verime): အသက်အတည်ပြုသင့်ရဲ့ (ဗြိတိန်) ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောငျးတစ် porn site ကိုသွားပါ, သင် reply သောစာသား, နှင့်အသက်အရွယ်အတည်ပြုပို့ပေးသငျသညျ 18 ကျော်ရှိပါတယ်အတည်ပြုရန်သင့်တယ်လီ provider ကမေးတယ်။
• App ကို (Yoti): တစ်ဦး app ကို download ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူဟုပြော, သင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ပြီးတော့တစ်ဦးက Selfie ။ Yoti လုံခြုံတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အထောက်အထားဖန်တီးရန်သင့်စာရွက်စာတမ်းရန်သင့် selfie တိုက်စစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ကအမည်ဝှက် 18 ကျော်သက်သေပြနိုင်ပြီးသင် porn site ကိုမှမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမပို့ကြဘူး။
•ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိစစ်အတည်ပြု (AVSecure): တစ် Teller သင်သည် 18 ကျော်ဖြစ်ကြပြီးသင် porn site ကိုသို့နေအိမ် ယူ. input ကိုတစ်ဦးကုဒ်ပေးသည်အတည်ပြုရှိရာစာတိုက်မှ ID ကိုသက်သေပြယူပါ။
ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်ဗြိတိန်အစိုးရက“ ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမျိုးအစားဘုတ်အဖွဲ့သည်အသက်အရွယ်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြဌာန်းသူဖြစ်ပြီး၊ ပါလီမန်မှအတည်ပြုချက်ပေးရမည်။ သူတို့ကလိုက်နာရန်စဉ်းစားရန်အသက်စစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်စံချိန်စံညွှန်းများဆုံးဖြတ်ရန်တာဝန်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အွန်လိုင်းအသက်အရွယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့်သင့်လျော်သောအဖြေကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်လိမ့်မည်။ ”
တစ်ဦးကံဇာတာကုန်ကျမယ်လို့ - သို့သော် MindGeek VET ရန်၎င်း၏ 115 သန်းနေ့စဉ်အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားတစ်စုံတစ်ဦးကပေးချေရန်မလိုပေ။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၏အဖြေတစ်ခုကိုတီထွင်ထားပါတယ်: AgeID ။
အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူ Alec Muffett ကဒီဂျစ်တယ်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပေးသည့် Open Rights Group ၏ဒါရိုက်တာနှင့်“ MindGeek ၏ချဉ်းကပ်နည်းသည်အလွန်ဥာဏ်ကောင်းသည်” ဟုဆိုသည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာတွေကိုတီထွင်မယ့်အစား AV နည်းပညာတွေရဲ့စာရင်းကနေ“ အလုပ်လုပ်တဲ့အရာမှန်သမျှ” ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ကတိပေးပြီးညစ်ညမ်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ ၀ ယ်ယူနိူင်တဲ့အလွယ်တကူသုံးနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုထဲမှာစုစည်းထားပါတယ်။ ” ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်စရာမလိုဟုအစိုးရကထိုကဲ့သို့သော AV နည်းပညာကိုဓါးများ၊ အက်စစ်၊ အရက်နှင့်အခြားကလေးများမနှစ်သက်သောထုတ်ကုန်များကိုအွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များတွင်အသုံးပြုရန်အစိုးရမှဆွေးနွေးနေပြီးဖြစ်သည်။
Pornhub သို့သွားပြီး၊ သင်၏သက်တမ်းကိုသက်သေပြရန်သင့်သက်တမ်းကိုသက်သေပြရန်တတိယပါတီ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေအတည်ပြုထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ AgeID သည်သင်ရွေးချယ်လိုက်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူသော“ pass” (သို့)“ fail” ဖြင့်ပြန်လည်အပ်နှံသည်။ ယခုတွင်သင့်တွင်အကောင့်တစ်ခုရှိပြီး MindGeek ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် MindGeek ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့သင်နောက်တစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်လျှင်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်။ ပွတ်တိုက်မှုမရှိသောကြောင့်ကင်ပိန်းလှုပ်ရှားသူများကသဘောတူမှုအပြည့်အဝပါသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂျက်ကီမန်က“ သူတို့ဟာယူကေမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူသန်း ၂၀ မှ ၂၅ သန်းအထိစာရင်းသွင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလူသိရှင်ကြားမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ “ ဒါကဗြိတိန်နိုင်ငံလူ ဦး ရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံပဲ။ ပထမလတွင်! ငါဆိုလိုတာ wow ။ "
သူတို့ဘယ်လိုပြုလိမ့်မည်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ MindGeek ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး က "ကျွန်တော်တို့ဟာ AgeID ကိုတတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုယူကေရဲ့အသွားအလာပမာဏပေါ် မူတည်၍ မျှတ။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်လိုင်စင်ချထားပေးသည်" ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အသက်စစ်ဆေးခြင်းကိုအရွယ်အစားသေးငယ်။ အသင့်အတင့်ဖြစ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာရှင်များ၊ တွဲဖက်များနှင့်ပြိုင်ဘက်များမှအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်သောအတွေ့အကြုံရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုဆက်လက်ထားရှိသည်။
ထို့ကြောင့်မည်သူမျှ MindGeek ၏ AV ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်မဆိုအတင်းအကျပ်သွားခိုင်းမည်မဟုတ်သော်လည်း Muffett က၎င်း၏အပြိုင်အဆိုင်နိမ့်ကျသောစျေးနှုန်းမဟာဗျူဟာသည်ပြိုင်ဘက်များကိုကြီးမားသောစျေးကွက်ဖိအားပေးလိမ့်မည်ဟုထပ်မံပြောကြားခဲ့သည် -“ ဒါက AgeID ကုမ္ပဏီကိုအလွန်တန်ဖိုးရှိသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပေးလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီတွေကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပေမယ့် MindGeek ရဲ့အစုရှယ်ယာအစိတ်အပိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
လုပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန်ငြင်းဆန်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအနေဖြင့်လည်း MindGeek မှထိုအရာကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ DCMS သို့ပေးပို့သည့်အခြားကြေငြာချက်တစ်ခုအရ Sky's firewall စာရင်းတွင်ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ၄.၅ သန်းကိုတားမြစ်ရန်ကုမ္ပဏီကအစိုးရအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ “ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူသည်ပထမလ (၁၂) လအတွင်း၎င်းတို့အားဆက်သွယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် AV စနစ်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကိုပြသခြင်းမပြုပါက၎င်းတို့သည်ပြenforcement္ဌာန်းခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုရှင်းပြသည်။
ဂျက်ကန်းက“ လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေအားလုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့အစိုးရကိုသူတို့ကအဓိကအားဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေကြတယ်။ “ စီးပွားဖြစ်ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်မင်းက MindGeek ကိုအများကြီးအကျိုးပြုတယ်။
MindGeek ၏သုံးစွဲသူများ၏ autoerotic အလေ့အထများကိုနားလည်ခြင်းသည်အလွန်ပင်တိကျမှန်ကန်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားနာမည်ဖြင့်မသိသေးသော်လည်း (အွန်လိုင်းတွင်) နေရာအနှံ့အွန်လိုင်းခြေရာခံခြင်းနှင့် browser fingerprinting တို့ကြောင့်သင်၏အိုင်ပီလိပ်စာသည် ၁၀ နာရီအတွင်းသတင်းများကြည့်လေ့ရှိသောဂျပန် custard porn ကိုနှစ်သက်ကြောင်းသိရှိသည်။ ပြီးတော့အဲဒါတစ်ခုလုံးအများကြီးပိုသိဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ “ ဂစ်တာကတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသေးစိတ်အချက်အလက် (သို့) သင်၏လူမှုမီဒီယာတစ်ခုလုံးရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သုံးစွဲသူများကဒီကုမ္ပဏီတွေကိုပေးမှာပါ။ MindGeek ကပါ ၀ င်မှုရှိမရှိ၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနဲ့လုံခြုံမှုရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်။ မင်းက MindGeek ကိုဈေးကွက်ရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်၊ ဒါကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။
ပိုပါတယ်။ "ဒီဥပဒေကြမ်းထဲမှာအသုံးပြုသူတွေလက်ဆင့်ကမ်းပေးမယ့်ဒီအရည်ရွှမ်းတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူး" ဟု Muffett ကပြောသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ကိုမမြင်ဘူး၊ မသိုလည်းသိုထားဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဥပဒေထဲမှာသူတို့လိုချင်တာမှန်သမျှမလုပ်နိုင်အောင်တားဆီးထားတာဘာမှမရှိဘူး။
အဲဒီအစားအစိုးရပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံးကိုစွန့်ခွာဖို့လိုသည်။ ထိုအခါအဝင်ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေကြမ်း, တူညီတဲ့နာမတျော၏ 1998 လုပ်ရပ်တခုတခုအပေါ်မှာအဆင့်မြှင့်ရှိပါတယ်။ သို့သော်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမယ့်အဓိကလုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုကာကွယ်တားဆီးဖို့သွားရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။
ဤအချက်မှာ MindGeek သည်မည်သည့်သုံးစွဲသူအချက်အလက်ကိုမျှသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အသုံးပြုသူအချက်အလက်ကိုမျှတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုအခိုင်အမာပြောကြားရန်အရေးကြီးသည်။ အချက်အလက်များကို၎င်းကိုယုံကြည်ရသောတတိယပါတီပံ့ပိုးသူများကကောက်ယူလိမ့်မည်။ MindGeek ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူက“ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအကောင်အထည်ဖော်မှုသည် account တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဒေတာဘေ့စ်ကိုဖောက်ထွင်းခံရပါကအချက်အလက်များကိုမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျပန်းနံပါတ်များနှင့်အက္ခရာများသာဖြစ်သည်။ မူရင်းအီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်ကိုထုတ်ဖေါ်ရန်ဤကြိုးများကိုပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ”
ထို့နောက် Muffett က“ ဒီဖော်ပြချက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဗိသုကာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုရင်ငါယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဗိသုကာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုမှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်သူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိရင်တောင်ကောင်းမွန်တဲ့လုံခြုံရေးကအလုပ်လုပ်တယ်။ ”
MindGeek ရဲ့ဆိုဒ်များဖြစ်စေ, သင်ယုံကြည်စေခြင်းငှါ၎င်းပိတ်ဆီးနေသောဘုံဗိမာန်မဟုတ်: Pornhub, Brazzers နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားကွင်းအားလုံးအတိတ်ငါးနှစ်အတွင်းအဓိကလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုခံစားခဲ့ကြရသည်။ သာပြီးခဲ့သည့်လက, Pornhub တစ်ကျော်တစ်နှစ်စူးစမျးရှာဖှေရေးမပွုရသေးသောအိပျခဲ့ကွောငျးတစ် malvertising hack ကအဝတ်မခြုံဘဲ ဖော်ထုတ် အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်နှင့်သြစတြေးလျမှသန်းချီသောသားကောင်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်
“ လူတိုင်းကမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး 'ငါတို့ကလေးတွေကိုညစ်ညမ်းမှုကနေကာကွယ်ရမယ်' ဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုအာရုံစိုက်ကြတယ်။ “ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီကြီးမားတဲ့အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိုလှောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုထားပါတယ်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါက်ကြားသောအခါမည်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမည်နည်း။ မည်သူသည်ထွက်ခွာသွားရလိမ့်မည်နည်း၊ အလုပ်ပြုတ်သွားမည်၊ သူတို့၏အာမခံပရီမီယံတက်သွားသည်ကိုကြည့်ရှုမည်၊ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း၏ညစ်ညမ်းသောသမိုင်းကြောင်းအတွက်သတင်းစာတစ်စောင်မည်မျှပေးမည်နည်း။ ”
MindGeek သည်မည်သည့်နေရာတွင်ထိုနေရာတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်။ “ ဒါဟာထင်မြင်ချက်တွေပါ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာလူ ဦး ရေ ၂၅ သန်းရဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ cookies တွေရှိမယ်လို့ယူဆထားတယ်၊ သူတို့ကစျေးကွက်ရလိုက်ပြီ။ တကယ်လို့ငါသာဖြစ်ခဲ့ရင်နောက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားမယ်။ ”
Muffett ကသူသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားလုံးကိုစုပ်ယူပြီးသင့်အားကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများဖြင့်ထိုးနှက်နေသောကြော်ငြာခြေရာခံကွန်ယက်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ အခြေခံအားဖြင့်၊ လူတွေကို web browser တွေသတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးသူတို့အရင်နေရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးကြော်ငြာတွေပေးနိုင်ပါတယ်။ "ဒါဟာ porn sites တွေနဲ့စတင်ပေမယ့်ဥယျာဉ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ အစိုးရကအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောင်းနိုင်သလဲဆိုတာထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။ ရုတ်တရက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကုန်ကျမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတော့သည်။
ပန်ဒိုရာ Blake ကယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်, ရိုက်တာ၏အိပ်မက်များ (NSFW) သည်ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၅၀၀ ခန့်ထိရောက်သွားသော“ အမျိုးသမီး pornn” ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ဤ porn-world order သစ်အောက်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေမည်နည်း။ မကြာသေးမီက genderqueer အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးကျားမ - ကြားနေနာမ်စားများနှင့်အတူရည်ညွှန်းခံရဖို့တောင်းဆိုသူကို Blake က, "တကယ်တော့တကယ်အရောင်းအလည်အပြောင်းအပြောင်းရှိပါတယ်, Blake က" အဓိကညစ်ညမ်းဆိုဒ်များအတွက်ဖောက်သည်များကိုပေးရသောသုံးစွဲသူပမာဏ၏ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။ နယ်ပယ်ဆိုဒ်များအတွက်မူ ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင် AgeID အသုံးပြုသောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလစဉ်လိုင်စင်ကြေးကောက်ခံခြင်းရှိမရှိ MindGeek ကပြောကြားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော် Blake ကမူ၎င်းသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသွားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါ့ခိုးယူထားတဲ့အမြတ်အစွန်းရဲ့အမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်ရဲ့ခိုးကူးထားသောအကြောင်းအရာများမှငွေရှာတဲ့ကုမ္ပဏီကိုငါပေးနေတုန်းပဲ။ ငါကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသည်လာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်းကိုအတည်ပြုရန်မတတ်နိုင်ပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အောက်မှာရှိကြလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်သူကဘယ်သူ့ကိုမှအရေးမကြီးတဲ့ fetish pornographer ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကနေထွက်သွားမှာလဲ။ Blake ကငါတို့ရှိသမျှသည်သင့်ပါတယ်ကပြောပါတယ်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးသည့်လူငယ်များစွာသော fetishists များအားလိင်နှင့်ပတ်သက်သောစူးစမ်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်နယ်ပယ် ၀ တ်စုံ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်ဟုဆိုကြသည်။ “ ကျနော့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အဓိကအချက်တစ်ခုကတော့အရှက်ကိုလျှော့ချဖို့၊ လိင်အင်္ဂါတွေ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လိင်မှုကိစ္စတွေအကြောင်းအသိပညာပေးဖို့နဲ့ကျွန်တော်အသက် ၁၃ နှစ်မှာငါခံစားခဲ့ရသူတွေကိုငါမထင်မှတ်လောက်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲ။ လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည့်လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်သည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ လူငယ်တွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတာကိုသူတို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့သိလာရင်အဲဒါကကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘာမှမမှားဘူး
ဒါမဟုတ်ဘူး။ Blake ကမူဥပဒေပြုမှုသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုညစ်ညမ်းသော“ အထီး - အကြည့်၊ ကန့်ကွက်သည့် fuck ဆိုတဲ့” ကမ္ဘာကြီးအဖြစ်သို့အသွင်ပြောင်းနိုင်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်နှိပ်စက်နိုင်သော၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြစ်ပြီးသင့်ကလေးများကိုအနည်းဆုံးမြင်စေလိုသည်ဟုပြောကြသည်။ "ပြွန် site algorithms သည်အရှိန်အဟုန်အရှိဆုံးသောလိင်မှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမြင်နိုင်စေသည်။ " “ ဒါကအာဏာဥပဒေဖြန့်ဝေမှုပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကြည့်ရှုလေလေ၊ ရှာဖွေရတာလွယ်လေလေရှုမြင်လေလေ၊ ထုတ်လုပ်သူများကလည်းလူကြိုက်များတာကိုသိတဲ့အတွက်ပိုပြီးကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအင်တာနက်ပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများစွာရှိသော်လည်း MindGeek ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုတိုးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်မြင်သာမှုလျော့နည်းလာမည်ကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့သည်။
ဒီ feature အတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုဘယ်သူမှမပြောလိုဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆရသောကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများမှအကာအကွယ်မပေးသင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအခြေအနေက Jackman, Muffett နဲ့ Blake တို့အတွက်တော့အဖြေမဟုတ်ဘူး။ ဘီဘီစီဟာသတွင်နိုင်ငံရေးသမား၏မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းသည်ဤဥပမာဖြစ်သည် ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးချုပ်"Jackman ကပြောပါတယ်။ အစိုးရက 'တစ်ခုခုလုပ်ရမယ်။ ဒါတစ်ခုခုပဲ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်ရလိမ့်မယ်။ ' အမှန်တရားကတော့လူငယ်အများစုကအင်တာနက်ပေါ်မှာသူတို့မိဘတွေထက်ပိုပြီးလိမ္မာပါးနပ်တယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတကယ်တမ်းရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီဥပဒေကငါတို့ကလေးတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးနားလည်အောင်သင်ပေးလိမ့်မယ်။ ”
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကအဖြစ်မှန်င်: အင်တာနက်ကျေးဇူးတင်စကား, သားသမီးသူတို့ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်သင့်သောအရာမြင်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မိဘများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ဒီတော့အဖြစ်ရှက်စရာ, ယနေ့ကလေးတစ်ဦးပြုစုပျိုးထောင်၏အစိတ်အပိုင်းဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားလိုပဲညစ်ညမ်းမကြာခဏအစွန်းအရာယူနိုငျသောစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းရှင်းပြဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် Blake ကသည်နှင့်အညီ, ဥပဒေပြုငါတို့ကလေးတွေကိုပိုကောင်းမိဘများဖြစ်ကိုကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရိုးသားမှု, သို့သော်, လိမ့်မည်။
Blake က“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူငယ်များကိုရှက်စရာမပါဘဲလိင်စိတ်နိုးထစေနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေပါက၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရှက်ကွဲခြင်းကိုမဖော်ထုတ်ရန်သေချာစေရမည်” “ လိင်မှုကိစ္စကိုရှက်ရွံ့နေသောမိဘများကညစ်ညမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအငြင်းပွားမှုများကို ဦး ဆောင်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သူတို့ဟာလိင်ကိစ္စမှာစိတ်ဒဏ်ရာရနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှာဖွေချင်တဲ့အရာကိုစူးစမ်းဖို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာရဖို့ဘယ်တော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်မခံစားရဘူး။ ”
MindGeek အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချခြင်းအတွက်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်အပြစ်တင်နိုင်ပါသလား။ MindGeek သည် Facebook, Google, Amazon, Uber နှင့်ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရုံစိုက်နေသောအခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုနှင့်အလွန်ကွာခြားပါသလား။ "ဒီအချက်ဟာ MindGeek ရဲ့အမှားပဲလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်။ သူတို့ကအရမ်းပါးရည်နပ်ရည်ရှိတဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနေကြတယ်" ဟုဂျက်ကန်းကဆိုသည်။ “ ကျနော့်ပြisနာကဗြိတိသျှအစိုးရဟာသန်းနဲ့ချီတဲ့သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်ကမ္ဘာ့ညစ်ညမ်းမှုကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလက်ထဲအပ်လိုက်တာပါပဲ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အရမ်းစဉ်းစားသင့်တယ်။ ”
ဒါပေမယ့် Muffett ကဒီအပတ်ထဲမှာငါ့ဆီအီးမေးလ်နဲ့ပို့တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ “ အစိုးရကကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမီအောင်လိုက်တဲ့အခါလွတ်လပ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာ၊ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသံသယဖြစ်စရာကောင်းအောင်အသုံးချနိုင်တာ၊ အက်ရှလေကိုတီထွင်တာ၊ hackable ပစ္စည်းများ Madison ကဲ့သို့သော databases ကို။ "
ဒါ့အပြင်သူကဆက်ပြောသည် -“ ၄ ဂိုးသာပါ ၀ င်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလှည့်စားနိုင်လိမ့်မယ်။ မင်းဒါကိုခင်ဗျားဘာလို့ခေါ်တာလဲမသိဘူး
သတိပေးချက်: ရုပ်ပုံများကိုထွက်လာပါတယ်! မူရင်းဆောင်းပါး
နှစ်ပေါင်းများစွာအပတ်စဉ်နာရီများစွာညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းသော ဦး နှောက်သည်စူပါမြင့်မားသောအလေ့အကျင့်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည်။ t.co/5hsSFWY5Aq